ज्योतिको सन्तान भएर जिउनु : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
ज्योतिको सन्तान भएर जिउनु
[0] August 13, 2014	| Resham Sunuwar
हामी प्रभुका जनहरुलाई ज्योतिका सन्तान भनिएको छ । किनकि हाम्रो जीवनको अन्धकार ख्रीष्टले हटाउनु भएको छ । तापनि कतिचोटी हामी ज्योतिमा हिंड्नुको साटो अन्धकारमा पो हिडीरहेको आपूmलाई पाउँदछौं । कति मानिस अन्धकारमा जिएर ज्योतिमा रहेको नाटक पनि गर्दछन् । कति पटक जानी जानी अन्धकारको बनधनमा पर्दछन् । कतिजना ज्योतिमा हिड्नलाई संघर्ष गर्दछन् । हरेक मानिस अन्धकारबाट छुटकारा पाएर ख्रीष्टको ज्योतिमा आउनु जरुरी छ । पावलले यही कुरा यहाँ तल दिईएको पदमा जोड दिएको पाइन्छ ।
“किनकि एक पल्ट तिमीहरु अन्धकार थियौ, तर प्रभुमा तिमीहरु उज्यालो भयौ । ज्योतिका सन्तान झैं हिड्डुल गर ।” एफिसी ५:८ ।
यहाँ पावलले एफिसीका मण्डलीलाई लेखेका पत्रमा भन्दछन् कि तिमीहरु एक पल्ट अन्धकार थियौ, तर प्रभुमा तिमीहरु उज्यालो भयौ । ज्योतिका सन्तान झैं हिडडुल गर । यस अर्थमा हामीले अन्धकारमय जीवन बाँचेको अवस्थाबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको हो । यहाँ विशेष गरी पावलले एफिसीका मण्डलीलाई जुन कुरा बताउका थिए, त्यो कुरा आज हाम्रो निम्ति पनि समसमयिक छ । जसलाई बिस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौं ।
–किनकि एक पल्ट तिमीहरु अन्धकार थियौ
यहाँ पावलले भन्दछन् कि तिमीहरु एक पल्ट अन्धकार थियौ । यो अन्धकार भनेको पापपूर्ण अवस्थामा रहेको अवस्था हो । जब अन्धकार भन्ने कुरा हुन्छ त्यो अवस्था भनेको पापै पापले जेलिएको अवस्था हो । त्यो अवस्था भनेको अनधकारमा रहेर गरिने अन्धकारपूर्ण कार्यमा लिप्त भएको अवस्था हो । अनैतिकता, अशुद्धता, मूर्तिपूजा, व्यभिचार, तन्त्रमन्त्र, घृणा, डाह, स्वार्थ, पियक्कडपना आदि विभिन्न प्रकारको अन्धकारको कार्यमा हराएका थियौ । अन्धकार थियौ भन्नुको अर्थ तपाईं पाप र दुष्टतामा रहनु हो ।
तिमीहरु अन्धकार थियौ भन्नुको अर्थ परमेश्वरलाई नचिनेको अवस्था र परमेश्वरको कुरालाई थाह नगरेको अवस्था हो । अन्धकारमा रहनु भनेको परमेश्वरलाई घृणा गर्नु हो किनकि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ । अन्धकारमा रहनु भनेको ख्रीष्टविना र उहाँको आत्माविना जिउनु हो ।
प्रेरित यूहन्नाले यसरी भनेका थिए,“फैसलाचाहिं यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ, र मानिसहरुले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए ।” यूहन्ना ३:१९ । यहाँ अन्धकारलाई किन रुचाईयो भन्दा तिनीहरुको काम नै दुष्ट भएको कुरा बताईएको छ ।
यहाँ पावलले अन्धकार र ज्योतिका विषयमा विशेष जोड दिएका छन् । जब कुनै मानिस अन्धकारमा रहन्छ भने उसले परमेश्वरको कुरालाई बुझ्न सक्दैन । उसले परमेश्वरको धामिकताको कुरा पनि देख्न सक्दैन । उसका हृदय कठोरताले भरिएको हुन्छ । किनकि अन्धकारको कार्यमा लिप्त भएपछि समस्याले ग्रसित जीवन बाँचीरहेका हुन्छन् । अन्धकारमा ज्योतिको जस्तो जीवन कदापि हुनै सक्दैन ।
अन्धकार ज्योति एकै ठाउँमा रहन सक्दैन । जब ज्योति आउँछ अन्धकार हटेर जानु पर्दछ । किनकि अन्धकारमा निश्चयता हुदैन । डर हुन्छ । प्रष्ट देख्न सकिदैन । अन्धकारमा धार्मिकता हुँदैन । शान्ति हुँदैन । आनन्द हुँदैन । अन्धकारमा डर अनि बन्धन हुन्छ ।
– तर प्रभुमा तिमीहरु उज्यालो भयौ
पावलले यहाँ फेरी भनेका छन् कि अहिले प्रभुमा तिमीहरु उज्यालो भयौ । कसरी तिनीहरु प्रभुमा उज्याला भए त? जब तिनीहरु प्रभुमा आए, विश्वास गरे, तिनीहरु उहाँको अनुग्रहद्धारा ख्रीष्टमा उज्याला भए । किनकि ख्रीष्ट आपैm ज्योति हुनुहुन्छ । यूहन्नाले भनेका छन् कि “येशूले तिनीहरुलाई फेरी भन्नु भयो, म संसारको ज्योति हुँ । मलाई पछयाउने अन्धकारमा हिंडडुल गर्नेछैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ ।” यूहन्ना ८:१२ । येशूलाई पछयाएको खण्डमा मात्रै हामीबाट अन्धकार भाग्नेछ । हामी ख्रीष्टको ज्योतिमा आउन सक्षम हुनेछौं । ज्योतिचाहिं सत्यता, धार्मिकता र ज्ञानको चिन्ह हो । जसरी घामले हरेक मानिसलाई ज्योति दिन्छ त्यसरी येशूले पनि सबै मानिसलाई उहाँको ज्योति दिनुहुन्छ । हामी उहाँको ज्योतिमा िहडने कि अन्धकारमा हिंडने भन्ने छनौट गर्ने काम गर्नु पर्दछ । ख्रीष्टको ज्योति सबै मानिसको लागि नै हो । येशूलाई पछयाउने र उहाँलाई विश्वास गर्ने हरेकले उहाँको ज्योति पाउँदछन् । येशूका पछिलाग्नेहरुले अन्धकारबाट छुटकारा पाएका हुन्छन् । यहाँ अन्धकारचाहिं पाप, आत्मिक अज्ञान र आत्मिक मृत्युको चिन्ह हो । यदि कोही मानिस पापमा जिएको छ भने उ ज्योतिमा हिडेको हुँदैन । आत्मिक अज्ञनतामा हराएको छ अनि आत्मिक मृत्युको कार्यमा लागेको छ भने उ ख्रीष्टको ज्योतिमा हिडेको हुँदैन । यदि हामी यी अन्धकारको कामहरु छोडेर ख्रीष्टलाई पछयाएको छौं भने अन्धकारमा हिंडडुल गर्नु पर्दैन ।
कुनै एकजना मानिसले परमेश्वरलाई चिन्नु भन्दा अगाडि उ पूर्ण रूपमा आत्मिक अन्धकारमा रहेको हुन्छ । तर परमेश्वरलाई चिनेपछि चाहिं उ आत्मिक अन्धकारबाट ज्योतिमा आएको हुन्छ । उसले आत्मिक अन्धकारबाट छुटकारा पाएको अवस्था हुन्छ । अनि हामी उहाँको ज्योतिमा हिडेको हुन्छ ।
यदि हामीमा ख्रीष्टको ज्योति उदाएको खण्डमा हाम्रो जीवनको अन्धकार हटेर जानेछ । आपैmमा हामी ज्योति होईनौं तर ख्रीष्टको ज्योति हामीमा भएर चम्किन्छ । हामी उहाँको कारण उज्यालो भएका छौं । जब हामी ख्रीष्टमा हुन्छौं तब ख्रीष्टको ज्योति हामीमा आउँदछ । जब हामी ख्रीष्टमा विश्वासद्धारा जोडिदछौं तब ख्रीष्टको ज्योति हामीमा आउँदछ । हामी उज्याला हुन्छौं । जब हामी ख्रीष्टको ज्योतिमा उज्याला हुन्छौं तब मानिसहरुले हामीमा ख्रीष्टको ज्योति देख्दछन् । अन्धकारमा रहेका मानिसहरुका लागि पनि ख्रीष्टको ज्योति चम्कन्छ ।
अब ज्योतिमा आएको अनि अन्धकार हटीगएको कुरा बताईएको छ । प्रभुमा तिमीहरु उज्याला भयौ । यो भनेको ख्रीष्टमा हाम्रा पाप क्षमा भएको अवस्था हो । हाम्रा सबै पाप मेटिएर शुद्ध भएको अनि धार्मिकतामा जिएको अवस्था हो । निश्चय पनि हामी एक समय अन्धकारमा थियौं तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको गजवको ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ ।
– ज्योतिका सन्तान झैं हिड्डुल गर
यहाँ पावलले ज्योतिको सन्तान भैंm हिंडडुल गर भनेर भनेका छन् । यो अन्धकारको ठिक विपरित शब्द हो । त्यसको अर्थ जब हामी ज्योतिमा आउँछौं हामीले अन्धकारको काम गर्नु हुँदैन । हाम्रो जीवनमा कुनै पनि प्रकारको अन्धकारका कामहरु हुनु हुँदैन । हामी ज्योतिका सन्तान जस्तो हिंड्नु भनेको परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा प्रगाढ बनाएर जिउनु हो अनि उहाँ ज्योति हुनुभएकोले उहाँको ज्योतिमा हिंड्नु हो ।
ज्योतिमा हिंडडुल गर्नु भनेको ख्रीष्टमा रहेर उहाँमा हिड्नु हो । उहाँको नमूनालाई पछयाउनु हो । हामीले हाम्रो पापहरु छोडेर ख्रीष्टको धार्मिकतामा जिउनु हो । उदहरणीय जीवन जिउनु हो । यदि हामीले अधर्मिक, अशुद्ध जीवन जिएको खण्डमा हामी ज्योतिमा हिंडेका हुँदैनौं । हामी अन्धकारमा नै रहीरहेका हुन्छौं । आत्मिक अन्धकारमा हराईरहेका हुन्छौं । हामीलाई यी सबै अवस्थाबाट निस्केका मानिस भएकाले सँधै ज्योतिमा हिंडडुल गर्नु आवश्यक छ भनेर बुभ्mनु जरुरी हुन्छ ।
हामी ख्रीष्टको नापसम्म पुग्नु जरुरी छ । ख्रीष्ट जस्तै हुनु जरुरी छ । उहाँको पादचापलाई पछयाउनु आवश्यक छ । किनकि ज्योतिमा हिंडडुल गर्नेले अन्धकारको काममा लागी रहँदैन । अन्धकारको कामको बन्धनमा पर्दैन । निश्चय पनि अन्धकारसँग ज्योतिको सम्बन्ध हुँदैन । जब ज्योति आउँछ अन्धकार भाग्छ । पावल भन्दछन् कि “अविश्वासीहरुसँग एउटै जुवामा ननारिओ । किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ? अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के साहभागिता?” २ कोरिन्थी ६:१४ । यहाँ अविश्वासीहरुसँग एउटै जुवामा ननारिओ भनेर भनेका छन् । किनकि जे कुरा अविश्वासीहरुले गर्छन्, ती सबै कुरालाई हामीले गर्नु हुदैन । दुष्टता अनि पापपूर्ण कार्यहरुमा साहभागिता जनाउनु हुँदैन । जे अविश्वासीले गर्दछ, त्यसको लहलहैमा लागेर हामीले अन्धकारको बन्धनमा आपूmलाई पार्नु हुँदैन । धर्म र अधर्मबीच साझेदारी हुनै सक्दैन । यी दुई विषय एकआपसमा विपरित ध्रुवमा उभिएका कुराहरु भएकोले सम्बन्ध हुन सक्दैन । अनि अँध्यारो र उज्यालो बीच पनि सम्बन्ध हुन सक्दैन । अँध्यारको काम र उज्यालोको काममा भएको भिन्नतालाई हामी बुभ्mन सक्नु पर्दछ । किनकि हामी अँध्यारोमा होईन तर ज्योतिका सन्तान झैं हिडडुल गर्नु पर्दछ ।
येशूका पछि लाग्ने मानिसहरु ख्रीष्टको ज्योति हुन् । येशूले भन्नुभयो, “तिमीहरु संसारको ज्योति हौ….।” मत्ती ५:१४ । प्रभुका जनहरु संसारका ज्योति हुन् । जुन ज्योति ख्रीष्टको ज्योति हो । हामी अन्धकार संसारमा ख्रीष्टको ज्योति बनेर हिड्नु पर्दछ । यहाँ पापको अन्धकार, अज्ञनताको अन्धकार, परमेश्वरसित टाढो भएर विछोडको अन्धकार, निराशा, अनेकन् अन्धकारमा हामी थिचिएका थियौं । हामी एक समय अन्धकारमा थियौं तर अहिले ख्रीष्टको कारण उज्याला भएका छौं अनि ज्योतिको सन्तान झैं हिडडुल गर्नु पर्दछ ।
शायद हामी कति जना ज्योतिमा हिंडन सकेका छैनौं होला । हामी अन्धकारमा परीरहेका छौं होला । शैतानचाहिं अन्धकारको शासक हो । अनि हामी त्यसको छल र अधीनमा पर्नु हुँदैन । शैतानले हामी ज्योतिमा आएको देख्न चाहैदन । किनकि त्यसरले मानिसहरु अन्धकारको बन्धनमा राख्न चाहन्छ । त्यो तपाईं स्वतन्त्र भएकोमा खुशी हुँदैन । जसरी हुन्छ त्यसले तपाईं अन्धकारमा रहेको चाहन्छ । तर ख्रीष्टले हामी ज्योतिमा हिडेको चाहनु हुन्छ । ख्रीष्टले हामीलाई शैतानको सबै अन्धकारको बन्धनबाट छुटकारा दिईसक्नु भएको छ । अन्धकारलाई हामीले इनकार गर्नु पर्दछ । निश्चय पनि हामी अन्धकारमा हिंड्ने मानिसहरु हुनु हुँदैन । हामी ज्योतिका सन्तान जस्तै हिडडुल गर्नु पर्दछ । ज्योतिमा हिंडडुल गर्नु भनेको धार्मिकता, पवित्रता, शुद्धता जिउनु अनि दुष्टताबाट अलग भएर परमेश्वरको महिमा गर्नु हो । परमेश्वरको आदेश अनुसार हिडनु हो ।
कविता शीर्षक :सेवक जिन्दगी »